Hawaii dia manambara torolàlana vaovao ho an'ny mpandeha iraisam-pirenena
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Hawaii dia manambara torolàlana vaovao ho an'ny mpandeha iraisam-pirenena
Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hita • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Fepetra iraisam-pirenena vaovao any Hawaii
Androany ny governora Hawaii Ige dia nanambara fepetra vaovao momba ny dia iraisam-pirenena ary koa ny famerana ny fahafaha-manao vaovao any amin'ny toerana ivorian'ny olona. Nanana izany ny Governora.
Hawaii izao dia manaraka ny fepetra federaly ho an'ny mpandeha iraisam-pirenena mandeha mivantana mankany amin'ny Aloha Fanjakana.
Ireo fepetra vaovao ireo dia hihatra manomboka ny 8 Novambra 2021.
Ho an'ny fitsangatsanganana an-trano, ny programa Hawaii Safe Travels dia hijanona amin'ny toerany, ary ireo mpandeha iraisam-pirenena izay miditra ao amin'ny firenena any an-kafa dia raisina ho toy ny mpandeha an-trano.
Tamin'ny herinandro lasa teo, nanambara ny fepetra vaovao ho an'ireo mpandeha iraisam-pirenena miditra any Etazonia ny governemanta federaly.
Hatramin'ny 8 Novambra, ny fepetra takian'ny vaksiny sy ny fitsapana dia ho an'ny mpandeha rehetra miditra any Etazonia. Vokatr'izany, ny Fanjakan'i Hawaii dia hifanaraka amin'ny fepetra takian'ny federaly amin'ny fidirana ao Etazonia ho an'ireo mpandeha iraisam-pirenena mandeha mivantana any Hawaii amin'ny 8 Novambra.
Hijanona amin'ny toerany ny Programa Safe Travels Hawaii ho an'ny dia an-trano. Ireo mpandeha iraisam-pirenena izay miditra ao amin'ny firenena any an-kafa ary handeha ho any Hawaii dia raisina ho toy ny mpandeha an-trano ho an'ny tanjon'ny programa Safe Travels Hawaii, izay midika fa tsy maintsy manaraka ny fepetra takian'ny fandaharantsika izy ireo. Noho izany dia tsy maintsy atao vaksiny izy ireo na manana fitsapana PCR ratsy.
Nanambara ihany koa ny Governemanta ny fanalefahana ny fepetra sasany amin'ny fanalefahana ny COVID-19. Ige dia nanao sonia didy mpanatanteraka androany mba hamahana ny fetra manerana ny fanjakana ho an'ny fivoriam-piarahamonina, trano fisakafoanana, trano fisotroana, toeram-piasana sosialy ary toeram-pisakafoanana. Ho fampahatsiahivana, ny hetsika an-trano any amin'ny trano fisakafoanana, trano fisotroana ary toeram-piasana sosialy dia tsy maintsy mitohy mitaky ny mpanjifa hipetraka miaraka amin'ny antokony, mitazona elanelana 6 metatra eo amin'ny vondrona, aza mifangaro ary manao saron-tava amin'ny fotoana rehetra afa-tsy rehefa misakafo na misotro.
Manomboka ny 12 Novambra, fiovana roa no hisy fiantraikany amin'ny hetsika ivelany sy anatiny.
Ny hetsika an-kalamanjana any amin'ny trano fisakafoanana, trano fisotroana ary toeram-piasana sosialy dia tsy hiharan'ireo fameperana ireo.
Mikasika ny fahafahan'ny hetsika mampidi-doza an-trano, toy ny trano fisakafoanana, trano fisotroana, ary toeram-piasana ara-tsosialy, dia apetraka amin'ny 50% ny fahafaha-manao anatiny raha tsy misy ny politika mitaky ny fanaovana vaksiny na valim-panadinana COVID-19 ratsy ao anatin'ny 48 ora ny Kaominina. tsy hisy fetran'ny fahafaha-manao. Anisan'izany ny gym, bar, trano fisakafoanana ary toeram-piasana sosialy.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny programa Hawaii Safe Travels, tsidiho ny tranonkala.